परिवार केटा | Coinfalls क्यासिनो
परिवार केटा एक धेरै लोकप्रिय टिभि वर्ग र जनता द्वारा प्रेम छ, जो छ. Igt शो छानिएको र एक स्लट खेल मा यसलाई गरे र जो खेलाडीहरू द्वारा राम्रो प्राप्त भएको थियो. खेलाडी यो स्लट खेल भन्दा गागा जाँदैछन्. यो सबैभन्दा रोचक सुविधा र ठूलो जीत केही खेलाडी प्रस्तुत.
परिवार केटा यो खेल संसारको ठूलो बाबाले विकास छ, igt. Igt वा अन्तर्राष्ट्रिय गेमिङ प्रौद्योगिकी सबैभन्दा लोकप्रिय अनलाइन स्लट खेल विकासकहरूको छ. Igt पहिले Gtech S.p.A र Lottomatica S.p.A रूपमा चिनिन्थ्यो. यो रोम मा स्थित लण्डन मुख्यालय र प्रमुख कार्यालय संग बहुराष्ट्रिय खेल डेभलपर, लस भेगास र प्रोभिडेन्स.
वर्ष मा 2015, यो कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय गेमिङ प्रौद्योगिकी लियो र यो कम्पनी को नाम अपनाए.
परिवार केटा मित्र ब्रायन नामकरण संग एक यात्रामा खेलाडी लिन्छ, पत्रुस, Lois, क्रिस, Stewie, मेग र आफ्ना साथीहरूलाई. यो पाँच रील र तीस paylines छ. यो सबै मजा बारेमा छ, मनोरञ्जन र पैसा.
यो प्रतीक ग्रिफिन परिवार देखि सबै वर्ण समावेश. अन्य प्रतीकहरू Quagmire समावेश, जो Swanson र क्लिभल्याण्ड.
यो स्लट को विषय धेरै रोचक छ. Igt डिजाइन को मामला मा एक ठूलो काम गरेको छ. एनिमेशन बिल्कुल चित्ताकर्षक छन्. टिभी शो को आवाज र ध्वनि पहिचान थियो संग पहिले नै परिचित छन् जो खेलाडी. यो स्लट खेल खेलाडी धेरै अचम्मको बोनस प्रदान गर्दछ. त्यहाँ बोनस दौर को धेरै छन्, यो मनोरंजक खेल मा multipliers र निःशुल्क spins. यी सुविधाहरू खेलाडी ठूलो बनाउन र पनि आनन्द को एक ठूलो रकम छ मौकाको.
खेलाडी अचम्मलाग्दो केटा Wilds जस्ता सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ, विश्व बोनस विशेषता, यो मातेको Name क्लैम बोनस, चिकन फाइट बोनस, Lois 'हट फ्री बोनस Spins, पत्रुसको विशेषता, Stewie गरेको विशेषता, ब्रायन गरेको विशेषता र Lois 'विशेषता. यी सबै सुविधाहरू एकदम मजा गर्दै छन् र वास्तविक नगद पुरस्कार आफ्नो बैंक भर्न leaps र सीमा गरेर खेलाडी मदत.
परिवार केटा सरल नियमहरू एउटा खेल हो. त्यहाँ रोचक राख्न सुविधाहरूको को प्रशस्त छन् र पनि यो आकर्षक बनाउन. यो एउटा सजिलो खोज्दै खेलाडीहरू लागि खेले छ- Breezy र रमाइलो खेल.